I-China Ball Blaster Production kanye neFektri | Izinsimbi Zokudlala zeHaiberi
I-Ball blaster, eyaziwa nangokuthi i-ballocity noma i-ball war, inikeza isiteji esinamandla sezinga elithile lezingane ukudlala ibhola le-ballistic. Sibonisa imicimbi yokudubula ebumnyameni enjengezithungu zezimbali nezicwecwe ezethula amabhola egwebu angenakubalwa angenayo yonke indawo. Izingane zeminyaka yonke zithanda ukuzizungeza ngalezi zibhaxa ze-foam zomdlalo omuhle wokudutshulwa kwebhola nokufaka dodging. Ibhola Blaster livame ukugqama emaphathini emihla yokuzalwa nemicimbi. Indawo yokudlala yangaphakathi ne-ball blaster enkundleni iyalela ukubakhona okuphezulu, futhi ithola ukuvakashelwa okuphindwe kaningi.
I-Ball Blaster iyimishini ethandwa kakhulu yezingane ezisezindongeni ezinobunzima. Izingane ziyazijabulisa ngokudlala, okulungele ukukhulisa ukunamathela kwamakhasimende futhi zilethe imali ehlala njalo.
I-Ball blaster yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme futhi eziqinile, futhi izinto zokwakha kanye nokwakheka kuhambisana ngokuphelele namazinga okuphepha. Idizayini yemidlalo ye-gameplay inengqondo ukunciphisa umthwalo wokusebenza kwakho.
Esedlule: I-Windmill Shed
Olandelayo: I-Projection slide Interactive Projection Gameion